I-Laser Cutting Yezindiza Ikhaphethi Yomkhakha Wezindiza - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
I-Laser Cutting Yezindiza Carpet Yomkhakha Wezindiza
Ubuchwepheshe be-Laser busetshenziswa kakhulu endizeni yezindiza kanye ne-aerospace, efana nokusika kwe-laser nokubhoboza izingxenye zejet, i-laser welding, i-laser cladding ne-3D laser cutting. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemishini ye-laser yenqubo enjalo, isb. Amandla aphezulu e-CO2 laser ne-fiber laser yezinto ezahlukene. I-Goldenlaser inikeza isixazululo se-laser cutting esilungiselelwe ukhaphethi wendiza.
Indlela yokusika yendabuko kakhaphethi wezindiza ukusika ngomshini. Inezithiyo ezinkulu kakhulu. Umngcele wokusika umpofu kakhulu futhi kulula ukuwohloka. Ukulandelwa futhi kudinga ukusika ngesandla onqenqemeni bese uthunga umphetho, futhi inqubo yokwenza ngemuva iyinkimbinkimbi.
Ngokwengeziwe, ukhaphethi wezindiza mude ngokwedlulele. Ukusikwa kwe-Laser kuyindlela elula yokusika ukhaphethi wendiza ngokunembile nangendlela efanele. I-Laser ivala onqenqemeni lwezingubo zokulala zezindiza ngokuzenzekelayo, asikho isidingo sokuthunga ngemuva kwalokho, esikwazi ukusika usayizi omude ngokwedlulele ngokunemba okuphezulu, ukusindisa abasebenzi kanye nokuguquguquka okuphezulu kwezinkontileka ezincane neziphakathi.
Izinto Zokusebenza Zekhaphethi Ezilungele Ukusika I-Laser
Inayiloni, okungezona nokwelukiweyo, i-Polypropylene, i-Polyester, indwangu ehlanganisiwe, i-EVA, iLeatherette, njll.
Ukubaluleka Okubalulekile kwe-Laser Cutting for Aviation Blanket
Gcina umphetho wokhaphethi ngokuzenzakalela, asikho isidingo sokuthunga futhi.
Elihambayo ithebula phambili izinto etafuleni ahlabayo ngokuzenzakalela, asikho isidingo ukungenelela mathupha ngesikhathi ahlabayo, ukonga zabasebenzi izindleko.
Ngokunemba High ahlabayo amaphethini super eside.
Izicelo ezihlobene zekhaphethi ezilungele ukusika nokumaka kwe-laser
Amarabi Wendawo, Ikhaphethi Lasendlini, Carpet Yangaphandle, IDoormat, Car Mat, Carpet Inlaying, Yoga Mat, Marine Mat, Aircraft Carpet, Floor Carpet, Logo Carpet, Aircraft Cover, EVA Mat, njll.
Isincomo Somshini we-Laser
X-Long Ithebula Laser Cutting Machine
Ububanzi betafula lokusika lingamamitha ayi-2.1, kanti ubude betafula bungaphezu kwamamitha ayi-11 ubude. Nge-X-Long Table, ungasika amaphethini amade amakhulu ngokudubula okukodwa, asikho isidingo sokusika uhhafu wamaphethini bese ucubungula zonke ezinye izinto. Ngakho-ke, alikho igebe lokuthunga engxenyeni yobuciko eyakhiwa yilomshini. I- X-Long Table Design icubungula izinto ngokunembile nangendlela efanele ngesikhathi esincane sokudla.